Apple Handresy: famaritana ny karazana sy ny sariny, ny endriky ny fambolena sy fiahiana, aretina ary bibikely - Zaridaina - 2019
Samihafa karazana paoma miaraka amin'ny vitaminina avo lenta - Uspensky
Ny Variety Uspenskoye dia manana fandaniana avo lenta sy fanandramana tsara amin'ny voankazo. Tena manamaivana ny hatsiaka izy io, miakatra hatramin'ny 40 degre fa tsy manavakavaka ny fivoarana manaraka.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny karazany dia ahitana ny fanamafisana ny fiterahana sy ny voka-dratsin'ny ascorbic asidra ao amin'ny voankazo voankazo. Amin'ny fampiasana azy, ny apples dia manerantany, izy ireo dia mety amin'ny fikarakarana ny thermique, ny fanadiovana ary ny fihinanana azy.
Vovoka sy aretina
Karazana manao ahoana izy io?
Varotra karazana varimbazaha - ny taom-pamokarana. Ny fahamatorana farany amin'ny voankazo dia tonga amin'ny Septambra-Oktobra.
Apples tsy maharitra ela - 40-60 andro. Mba hampitomboana io vanim-potoana io, mila mijanona ao amin'ny trano fivoahana mangatsiatsiaka izy ireo, efa voafehy tamin'ny gazety na ny gazety. Tena be Zava-dehibe ny manaisotra ny voankazo tsy manimba azy ireo amin'ny endriny, ny mangana ary ny fanitsakitsahana ny tsy fisian'ny hoditra. Noho izany, ireo paoma dia voaangona avy amin'ny hazo amin'ny tanany na amin'ny fitaovana manokana, tsy manosika azy amin'ny tany.
Raha tsy azo atao ny manambatra ny pèl tsirairay, dia apetraka ao anaty boaty hazo izy ireo, ary napetraka amin'ny gazety ny gazety. Mandritra ny fitahirizana, dia mihamidina tsikelikely ny voankazo.
Tranon'io karazana io fanangonan-tsakafo. Ho an'ity hazo ririnina sy fahavaratra ity dia mety.
Ny fanangonan'ny fiaraha-miombon'antoka dia mampitombo ny habetsahana sy ny kalitaon'ny vokatra.
Ny isam-batan'olona dia voafaritra tsara amin'ny fisehoan-javatra, satria manana toetra manokana miavaka aminy.
samy hafa Mitombo avo dia avo sy mihabetsaka.
Ny satroboninahitra dia tsy dia matevina, fa mitongilana.
Mitopy kely sy malazo be dia be.. Ny sampana skeletal dia matevina, mena volon-koditra, mandamina tsara ary saika eo amin'ny sehatra havanana. Ny vokatra dia mitranga eo amin'ny voankazo amam-borona, ny taon-dasa, ny fisakafoanana ary ny kolchatka tsotra.
Ny sisa amin'ny lozaka dia marevaka - kestnut ny lokony, izy ireo dia mahitsy, boribory, mena - pubescent. Ny ravin-tsoavaly dia manana tendrony ambony, ny tavy dia manjelanjelatra mamirapiratra, ny loko dia maitso. Ny habeny dia lehibe, loko matevina, lava lava. Ny rantsana dia mahatsiravina, rakotra voa lehibe.
Ny Crohn dia sahiran-tsaina fotsiny noho io fahasosorana io.
Ny akanjo dia lehibe, mavokely mavokely ary loko kely. Ny legioma dia loaka.
Mampiavaka ny habe sy ny endrika mahafinaritra.
Ny lanjan'ny pelsel iray dia 180-200 g.
Ny endrika dia oval-round, ny voankazo dia mitovy sy mitovy.
Amin'ny loko maitso-mavo dia mivadika "mena". Ny pelota dia manana glossy glossy glisera tsara, maina amin'ny fikasihana.
Ny tselatra dia fohy, mahitsy; kapoakany. Tsy misy ny trangan'ny halavany sy ny halavany. Ny masomboly dia toy ny dipoavatra, mainty sy maitso ary maivana.
Ny nofo dia tsara tarehy, malefaka ary mamy, manana menaka mahafinaritra, tsy mahalaza, ny loko dia fotsy lanezy. Ao aminy Misy fatran'ny vitamin C be dia be, misy setroka maina, pektina, saka ary p-active.
Ny Variety Uspenskoe dia nanamboatra N.I. Saveliev, mpahay siansa - mpikaroka momba ny Fikambanana Rosiana Fikambanana Rosiana rehetra momba ny Fiterahana sy ny Genetics momba ny voankazo voajanahary antsoina hoe I.V. Michurina. izany Nitsabaka tamin'i Bessemyanka michurinskaya aho ary nanaiky. Tamin'ny 1999 dia nafindra tany amin'ny fitsapam-panjakana ny varotra.
Central Chernozem faritra. Ny hazo amam-borona dia mitombo tsara ao amin'ny faritr'i Volga sy any Altai. Zoning vita tamin'ny taona 2004
Ambony lavitra noho ny salan'isa. Ny hazo any an-jaridia dia mamoa voa isan-taona, tsy misy fiatoana, manomboka 5 taona aorian'ny fambolena. Amin'ny ankapobeny dia mamokatra 230-260 santimetatra avy amin'ny hektara iray izy ireo, iray ny hazo iray afaka mamokatra voankazo 40 kg eo ho eo.
Tahaka ny ankamaroan'ny paoma hafa, ny karazam-boankazo dia manamboatra Ouspensky anao miaraka amin'ny fakany misokatra.
Ilaina avy hatrany ny tany. Raha mbola manam-potoana maina ny fakany, dia napetraka ao anaty fitoeran-drano misy rano mandritra ny 1-2 andro.
Mba hahazoana hazo matevina, mahafinaritra ny vokatra tsara dia mila fahazavana tsara ianao mandritra ny vanim-potoanan'ny andro.
Varimbariana Apple mitaky masoandro be, ny fialana dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny fotoana fohy.
Ny tany dia tokony ho marevaka, miaraka amin'ny rivotra marefo sy ny rivotra. Azonao atao ny manamboatra hazo eny amin'ny tany fasika sy loamy. Ny fiantraikany mahantra sy ny tany lalina dia mivoatra amin'ny fampidirana ny perlite, tavoahangy, fasika, humus, compost.
Azonao ampiasaina koa ny ovy mineraly - potassium, phosphorus, nitrogen. Ny alan'ny tany dia avela tsy handalo akaikin'ny 2 m mankany amin'ny faritra.
Ny haben'ny lavaka fananganana sapling dia 70 × 90 cm, ny elanelana misy eo amin'ny hazo dia 3,5-4 m. Ny faran'ny lavaka dia feno dongom-bokatra sy mineraly. Ny hazo dia napetraka malalaka. mamelatra ny fakany, mandrakotra ny tany amin'ny fototra ary nanipika azy. Mba hampiasana rano fanondrahana rano 2-3, dia ny molotra, ny faka fotsy eo amin'ny fonosana.
Ilaina mialoha mialoha ny famatsian-drano. Raha ny lohataona dia amin'ny lohataona - ny fampiofanana dia atao amin'ny fahalavoana. Raha hamboly hazo amin'ny lohataona ianao - ataovy lavaka amin'ny lohataona.
Ny fahasamihafana amin'ny ririnina dia tsy mamela ny mandrakotra ny tanora ao anatin'ny ririnina milamina.
Amin'ny lohataona, fepetra fisorohana no alaina hiadiana amin'ny bibikely sy ny aretina, anisan'izany ny fantson-koditra mifono vy, mampiakatra ny fandefasana fehiloha sy manondraka bibikely avy amin'ny simika sy biolojika.
Ny voan'ny voankazo tsy voatery dia voajinina mandritra ny vanim-potoana ary alaina amin'ny fiterahana amin'ny biby na mandoro mba hampihenana ny isan'ny bibikely.
Ny satroboninahitra miparitaka dia mitaky ny famongorana farafahakeliny isaky ny lohataona.. Izany dia manampy amin'ny fampitomboana ny habe ary hanatsara ny tsiron'ny apples.
Ny apples amin'io karazany io dia manana tsy fahampiana manan-danja - rehefa miditra izy ireo dia miditra amin'ny tany. Noho izany dia zava-dehibe ny manala azy ireo amin'ny hazo amin'ny fotoana.
Aorian'ny faran'ny fijinjana, ny tany dia lavaka amin'ny faribolan'ny manodidina, ny ravina maina dia may.
Tsy afaka ny hatahotra ianao Ny aretina mahazatra indrindra amin'ny hazo paoma - manako-pery, satria noho ny fahasamihafany isan-karazany dia manana ny tsy fahaleovantena monogène.
Indrisy anefa fa tsy azo lazaina momba ny fandoroana bakteria, ny voam-bary, ny cytosporose, ny alikaola ary ny homamiadan'ny mainty hoditra.
Mitombo koa ny pesta. Ny parasita mahazatra indrindra dia ny karodrivotra kodiakazo, aphid, voangory, voninkazo, ravinkazo, mpanamboatra ravina (mena), mena mena.
Famintinana ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo, afaka milaza izany isika Ouspenskoe vary varimbazaha dia hazo tsara avo lenta izay tsy mila fikarakarana manokana.. Na dia amin'ny fikarakarana kely aza dia mamaly amin'ny voankazo mahatalanjona izy ireo, tsy hoe matsiro, fa tsara tarehy ihany koa.
Ireo apples ireo dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana trano, fitehirizana na fivarotana. Raha ny marina, izy ireo Tsy mitovy amin'ny sary miloko marevaka, ny endriny marina sy ny habe mitovy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Samihafa karazana paoma miaraka amin'ny vitaminina avo lenta - Uspensky